Mexico - Mexican Ishishini Etiquette, Vital Manners, Emnqamlezweni, Yenkcubeko Unxibelelwano, kwaye Geert Hofstede Uhlalutyo
Mexico – Mexican Ishishini Etiquette, Vital Manners, Emnqamlezweni, Yenkcubeko Unxibelelwano, kwaye Geert Hofstede Uhlalutyo
Mexico sesinye-United States’ ibaluleke kakhulu urhwebo partners. Kubalulekile lwesithathu likhulu ngaphandlecomment kwi-United States, kwaye yayo ngamazwe urhwebo neemveliso ziquka i-oli kumazwe angaphandle, yokhenketho, iimveliso zayo ezininzi yowiso-mthetho izityalo (ngokuba maquiladoras). Uninzi basebenza umkhosi oqeshwe sezolimo. Umntu kufuneka azi umntu phambi kokwenza ishishini kunye naye okanye yakhe, kwaye kuphela indlela ukwazi umntu kwi-Mexico kukuba bazi ukuba usapho. Personal budlelwane nabanye ngabo isitshixo kwimpumelelo yeshishini. Ukuze ukwazi ukwenza olu nxibelelwano intermediaries zisetyenziswa. Kubaluleke kakhulu, ingakumbi kuba eliphezulu-ranking ntlanganiso, ukusebenzisa umntu olilungu kwazeke ukuba Mexican businessman okanye umfazi uvumelekile ukuba intlanganiso. Lento yakho ‘ishishini losapho’ unxibelelwano, mntu lowo uza angenise kuwe. Lo mntu ufumana i-bridge ukuba wakhela i trust kuyimfuneko ukwenza ushishino kwi-Mexico. Mexicans ingaba eshushu kwaye inobabalo. Baya kwamkela manana attitude, kwaye musa kwamkela ixesha-ngu-imali mentality ezininzi ezinye cultures. Endala Mexican esithi kukuba ‘Emntla Americans waphila umsebenzi, kodwa Mexicans umsebenzi ukuze siphile. Hlonipha uluvo ixesha imicimbi yayo. Ukuba yakho yendalo tendency kukuba athethe ngokukhawuleza, okanye unesigulo forceful okanye bukhali tone ka ilizwi, kuba ngobukho njani uvumelekile ukuza kuwo. Kuba elinovakalelo ukuba inyathelo lophuhliso kwaye tone esetyenziswa kwi-Mexico. Kungenjalo uza kutshabalalisa a kubudlelwane neqabane lakho caustic tone kwaye ukuziphatha. Kanjalo, iyagqitha pha ngaphandle esithi ukuba jokes malunga ‘Montezuma ke revenge’ ingaba ezingafanelekanga. Abantu bamele wear a conservative onzulu isuti kwaye tie. Yakho wardrobe kufanele kuquke suits ukuba ingaba classic imigca kwaye tailoring kwi-ngwevu okanye nevi, kwaye omhlophe okanye ukukhanya blue shirts. I-mhlophe shirt kubaluleke ngakumbi kulandelwe kwaye kufuneka worn xa formality intlanganiso dictates. Abafazi kufuneka wear a dress okanye skirt kwaye blouse. A classic isuti kanjalo zinokuba worn. Akha wardrobe usebenzisa classic imigca, classic skirt lengths, kwaye ezisisiseko classic imibala – ngwevu, nevi, mhlophe, kwaye ivory. Abantu babe wear pants, kwaye ukukhanya shirt kuba casual. Isicwangciso i-casual wardrobe usebenzisa classic imibala, dibanisa camel, kwaye uza kuba casual, kanti polished. Kufuneka wenze ithuba wear a guayabera, emangalisayo esiqhelekileyo lightweight shirt, wena wear ngu ngaphandle phezu yakho pants. Oku uyilo kakhulu ethambileyo kwi-warmer imozulu. Nabafazi babe wear a blouse kunye pants okanye skirt kuba casual. Ukuba ikho ngokwakho njengoko elinolwazi kwaye polished, nkqu kwi-i -“ndibhala le leta”ukumisela, ukwakha yakho casual wardrobe usebenzisa classic shades ka-ngwevu, okwesibhakabhaka, camel, mhlophe kwaye ivory. Simi neqabane lakho izandla zakho hips icebisa aggressiveness kwaye ukugcina izandla zenu yakho pockets ngu impolite. Abantu kunyikima izandla phezu kwintlanganiso eshiya kwaye ndiya linda kuba umfazi ukuze abe kuqala ukuba anikele yamluma esandleni. Nabafazi babe kunyikima izandla kunye abantu nabanye abafazi. Amaxesha amaninzi, umfazi babe pat omnye umfazi ke shoulder okanye forearm, okanye asazanga kwi cheek. Punctuality ayikho rigid ngenxa ugxininiso lwalo kwi personal izibophelelo. Elona xesha ziganeko ngu phakathi: a. m.
m, kunye emva kwexesha kwemini yesibini oyikhethileyo. Ushishino lunches, kunokuba dinners ingaba eziqhelekileyo ifomu ishishini entertaining kwaye ikholisa prolonged imicimbi, ekuqalekeni phakathi: p. m. kwaye lasting isithathu kwi sine iiyure, kunye abancinane ixesha ekubeni devoted ukuba ukuthelekisa ishishini. Lunches ingaba i-kubalulekile inxalenye ishishini ukuseka i-personal budlelwane. Isebenza breakfasts bamele kanjalo ethandwa kakhulu, kwintlanganiso ngomhla okanye: ngexesha lakho hotel, kwaye idla lasting iiyure ezimbini ngexesha kakhulu. Mexican abantu bamele eshushu kwaye eyobuhlobo kwaye enze izinto ezininzi yesitalato uqhagamshelane. Baya rhoqo touch shoulders okanye bamba omnye ingalo. Ukuba arhoxe ukususela kweli touch sibonwa insulting. Wanikela izipho yeshishini executives ayikho ezifunekayo. Ezincinane izinto kunye inkampani i-logo (kuba i-lokuqala utyelelo) ingaba appreciated. Secretaries ingaba appreciate izipho. Ukuba zinika a exabisekileyo isipho, ezifana perfume okanye scarf, kaloku oko kwi kubuyela ndwendwela. Umntu wanikela ngayo ukuba ibhinqa unobhala kufuneka abonise isipho evela umkakhe. Izipho kusini na efunekayo ukuze sangokuhlwa bust kodwa iya kuba appreciated. Ezilungileyo nemigaqo yokusebenzisa imichiza ingaba candy, iintyatyambo (wathumela ozayo ixesha), okanye wobulali crafts ukusuka ekhaya. Abafazi akufunekanga lokumema indoda counterpart kuba kushishino isidlo sasemini ngaphandle kokuba okunye associates okanye amaqabane kuzimasa. Kanjalo, Mexican abantu baya graciously umzamo kuhlawulelwe a meal, nkqu nokuba awuqinisekanga ukusingatha kuyo. A elinolwazi indlela umququzeleli a meal kukuba dine okanye lunch e yakho hotel. Phambi-cola ukuba nelungelo meal yongezelela yakho hotel mthetho usayilwayo. Tipping yindlela efanelekileyo kuba neenkonzo ezinikezelwe. Ingaba umvuzo rhoqo ngoko ke low ukuba abasebenzi zixhomekeke heavily kwi gratuities ngenxa yabo ingeniso. Amaphawu zibalulekile kwaye kufuneka oku kubandakanya kwi ishishini amakhadi. Nibe ngqo kuthetha ukuba umntu ngabo kuphela ngokusebenzisa yakhe okanye yakhe isihloko kuphela, ngaphandle kuquka igama lokugqibela. Doctor yi kagqirha okanye Iph D. Unjingalwazi kokuba iwonga kuba utitshala. Ingenious ufumana i-engineer. Aquatec ufumana i-architect.
Abogado ngu-a lawyer
Abantu ngaphandle elinolwazi amaphawu ingaba kuhlangatyezwana usebenzisa Umnu, Unkskz, okanye Unobuhle wakhe, okanye ifani yakhe. Senor ngu Mnu, Senora ngu Unkskz, kwaye Senorita ngu Unobuhle Hispanics ngokubanzi sebenzisa u-surnames. Lokuqala nefani ezidweliswe evela kubawo, kwaye yesibini nefani ezidweliswe evela nomama wakhe. Xa ukuthetha umntu sebenzisa yakhe okanye lukayise ke nefani. A watshata umfazi uza yongeza umyeni ke igama likabawo esiphelweni wakhe igama, idla iboniswe de (igama) xa ebhaliweyo. Lo mfazi izakuba formally kuhlangatyezwana njengoko Senora de (igama)
← Imicimbi yayo ka-Mexican Dating budlelwane nabanye Dating Iincam
Free Mexican dating site. Kuhlangana wobulali icacile-intanethi kwi-Mexico →